I-gvSIG: iiGajes zolu kunye nolunye urhwebo-iGeofumadas
Agasti, 2009 GvSIG, qgis
Indlela izixhobo zasimahla ezikhule ngayo inomdla, kwiminyaka ethile edlulileyo, xa sithetha nge-GIS yasimahla, kwavakala ngathi yi-UNIX, kwilizwi likaGeek nakwinqanaba lokungathembani ngenxa yokoyika into engaziwayo. Yonke into etshintshe kakhulu ngokwahluka kwezisombululo ezingakhuli kuphela kulwakhiwo lweendlela ezilindelweyo kodwa kunye nezicwangciso zobuchule zokwenza uxinano, ukuvavanya kunye nokulungelelanisa ubukrelekrele obuhlangeneyo ngokusekwe kutshintshiselwano. Imigangatho ye-OSGeo kunye ne-OGC ziziphumo zokukhula.
Kuyenzeka ukuba ngoku ngokuzithemba okukhulu singacebisa izisombululo zemithombo evulekileyo esebenzayo (i-QGis okanye i-gvSIG ukunika imizekelo emibini), kukho iyantlukwano onokukhetha kuyo, nangona sisazi ukuba kwiminyaka embalwa uninzi luza kuyekiswa okanye luza kudityaniswa olona luzinzo (umzekelo iimeko zeQgis + Ingca kunye ne-gvSIG + Sextante). Umba oza kusinda kufuneka uqwalaselwe nzulu namhlanje, kuba ukuthembeka kunomda, uzinzo lwesoftware ye-GIS phantsi kwendlela evulekileyo yemithombo esekwe kwiintsika ezinje: Itekhnoloji, ishishini kunye noluntu.
Ukuzinza kwezobuchwepheshe Kuyalawuleka ngandlela ithile, okanye ubuncinci kubonakala ngathi isingqi sayo esiphambeneyo sokwenza uphuhliso lungasebenzi yonke imizuzu emi-5 ayisasoyiki. Kodwa sifunde ukuqonda ukuba le ikwayindlela yokucoceka indawo kunye nokusetyenziswa okuneengxaki zokuzinza kuphuma endleleni, nangona kubuhlungu kwabathembekileyo. Ukwenza umzekelo, i-Ilwis, ethi ngaphandle kokufaneleka kwayo, kunzima ukuphuma kwiVisual Basic 6.
Ukugcinwa kwemali, okanye oko sikubiza ngokuba ngumsebenzi, uhambe ngokumangalisayo. Ngoku zininzi iiprojekthi ezixhaswa kukuzinikela okusulungekileyo, ngeziseko, iiprojekthi ezisekwe ngokusesikweni okanye amaqhosha alula "okusebenzisana ngePaypal". Kule nqanaba, imeko ye-gvSIG iyathandeka, eyinxalenye ye iprojekthi enkulu lokufudukela kwi-software yesistim, unokuzinza kwezemali ngokucwangciswe kakuhle.
Kodwa ukugcinwa koluntu Kubonakala ngathi yeyona axis inzima ukuyilawula, kuba ayixhomekeki kuphela "kumdali" kodwa ngenxa yokuba inefuthe elikhulu kwicandelo lobuchwepheshe (kuzo zombini iindlela) kwaye inokwenza kube nzima ukuphatha umba wezezimali. Iingcali zezezimali nezetekhnoloji ziqeqeshwe zizifundiswa, kwaye ukuba ayizizo isayensi ngqo, zichazwe ngokwethiyori. Umxholo "wolu hlobo loluntu" uvela kulwandiso lwe-Intanethi kunye nokudityaniswa kwezinto eziye zavela ngokwendalo ngenxa "yoluntu"; ukuze i-axis ihlukane phakathi, phakathi konxibelelwano, imfundo, ukuthengisa, itekhnoloji nayo yonke into enxibe isayikholoji yezentlalo.
Intlonipho yam kwabo basemva kwalo mgca, ngeeprojekthi ezinje nge-gvSIG, elindele ukuba ilizwe liphela libe ndlongondlongo. Ndimele ndivume ukuba yenye yeeprojekthi endizithanda kakhulu (ngaphandle kwengozi yalo msebenzi), ndicinga ukuba bazuze okuninzi kungekuphela kwimeko ye-Hispanic (enzima yona).
Omnye wemigca yale axis (kwaye ekuphela kwento endiza kuyichukumisa namhlanje) ngumba "wokunyaniseka komsebenzisi" ngokutshintshiselana ngolwazi. Ukulinganisa oku kufuneka kube nzima kakhulu, ke ndiza kuzisekela kumthambo ongenangqondo kunokuba kulula:
I-Wikipedia iphethwe ngabantu.
-Umsebenzisi onyanisekileyo kwi-software, othanda ukuthetha, ubhala ngako.
-Ngommandla woluntu, bonke abasebenzisi abathembekileyo kule software, baya kuncedisa kwiWikipedia.
Kuyinto eyinqaba, ndiyazi; kodwa mna ndifuna ukubeka umzekelo, kuba nangona Wikipedia ngokubanzi wagxeka yi buchopho njengoko fideligna umthombo, umxholo wayo yonke imihla uba kubhekiselwa lokuqala kwaye lidlala indima ebalulekileyo emtshatweni umsebenzisi-uphendlo-umxholo.
Ngoko, ndasebenzisa "iiprogram zenkcazelo yoluntu" njengesiqalo sokuqala, ngoko ndaya kwimiba nganye yeenkqubo ze-11 kwaye ndabala inani lamagama apho, ukususela kwisihloko ukuya kwiinkcukacha ezikhankanyiweyo.
Phantse amagama angama-5,000 adibanisayo, umphumo ungolu hlobo lulandelayo:
Izixhobo zoMephu zeGeneric
Imephu yeGuide Open Open
Qaphela ukuba isamba seGvSIG + Sextante sithatha
I-21%, akumangalisi, ukuba sikhumbula ukuba ezi ziiprojekthi eziye zazinikela ngokubanzi kwiimviwo eziququzelelweyo zengcaciso kwiziko labo ezisemthethweni, zityalomali inkqubo yokwenza inkqubo, iincwadi, izintlu zomsebenzisi kunye neminye imizamo emanyeneyo.
Siyakwazi ukubona ukuba i-QGis + Grass ishiywe emva kwayo, ukusabalalisa kwayo kunzima kakhulu kumxhasi weSpanishi, nangona i-Grass mhlawumbi iyona mdala kunazo zonke i-Open Source GIS esaphila.
Lo ngumcimbi wokunyaniseka osekwe kukuphindaphinda, kwaye ujonge iWikipedia kuphela njengomzekelo. Njengoko sibona, kwaye ngolwaneliseko, i-gvSIG + Sextante inefuthe elibalulekileyo kwimeko ye-Hispanic. Ngokunokwenzeka siya kubona isimilo esifanayo kwiinethiwekhi zentlalo, kwiibhloko, kwiimagazini zekhompyuter nakwiiforamu zeengxoxo, nangona kunjalo, oku kuvelisa inqanaba elikhulu loxanduva kuluntu.
Kodwa inyani yokuba "ii gajes zethu" zisikhokelela ekubeni sibuze imibuzo enxulumene nonxibelelwano ayizami ukucebisa ukuba singoochwephesha kumba wozinzo. Kuyinxalenye yokuba "luluntu", ziindlela abasabela ngazo abo banethemba ngokholo olukhulu kwiiprojekthi zolu bungakanani (nangona kunjalo, ndiyavuma, ayithetheleli ithoni).
Ngokufanelekileyo kuyakufuneka kuthathelwe ingqalelo ukusasazwa kolwazi, oluhluzwa ngeendlela ezahlukeneyo ezikhuthaza eli phulo (njengemeko yeGeomática Libre Venezuela) okanye unxibelelwano olungekho mthethweni kuluhlu losasazo oluba ziinyani ezingekho semthethweni nezenza okulindelweyo. Oku nezinye izinto ezingenaxabiso zicwangciswe ngemigaqo-nkqubo yonxibelelwano yeziko, apho "amajelo oluntu" kufuneka aqondwe, ngokuchaseneyo nangokuchaseneyo, ukuqinisekisa inxenye yokomelela.
Kuyafaneleka ukuphonononga indlela abahlali abasabela ngayo kusasazo, kuba uluntu luyinto ephilayo, linendlela yokuziphatha efana neyabantu, iyasabela, iyacinga, iyaziva, iyathetha, iyabhala, iyakhalaza, iyavuya kwaye ngaphezu kwako konke inolindelo uyilo. Umzekelo wendlela ulindelo olwenziwe ngayo:
-Iyintoni into embi malunga ne-gvSIG 1.3, ukuba sele sibone gvSIG 1.9
-Iyiphi into engalunganga nge-gvSIG 1.9: yintoni engaqinisekanga
-Iyintoni into engalunganga engaqinisekiyo: ukuba asiyazi ukuba iya kuba nini
- Umzuzu: kubonakala ngathi kungekudala kuya kuba sele ikhona.
-Ukuba kuya kuba ...
Kuyimfuneko ukuba uphonononge umba woluntu, kwiprojekthi enkulu kangaka, enobubanzi behlabathi, beenkcubeko ezahlukeneyo. Unxibelelwano rhoqo ngokusesikweni alubuhlungu, ukuba lunegalelo kuzinzo loluntu.
Ekugqibeleni isithuba sokuqala esandishukumisele ukuba ndiyichukumise into endimele ndiyicime ngayo, emva kokuba ama-patches ayengenakwenzeka kwaye umtya omtsha awuhambelani nongubo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuxhaswa koPhuhliso loMmandla
Post Next Guqula imifanekiso ukuya kwi vectorOkulandelayo »